Raharaha 07 Febroary : any amin’ny TPI ny baolina ! – MyDago.com aime Madagascar
Nanao valan-dresaka hoan’ny mpanao gazety io hariva io tetsy amin’ny Carlton ny manam-pahaizana manokana ny lalana iraisam-pirenena, nahitana an’i Brian Currin sy Me Razaiarisolo Bakoly
Tamin’izany no namelabelarany ny momba ny raharaha 07 febroary 2009 nandotoana sy hanaratsiana ny filoha Ravalomanana.
Efa tafapetraka eo anivon’ny TPI ny antontan-taratasy mahakasika izany ary hangatahina ny hametrahana ilay vaomiera mahaleon-tena hanadihady ny tena zava-nitranga marina tamin’io fotoana io.
Nokian’izy ireo ihany koa ny fomba nitsarana izany raharaha izany, sady tsy natrehan’ny voapanga no tsy nanaraka ny lalam-panorenana velona tamin’izany izay nanamarika fa tsy azo tsaraina amin’io rafi-pitsarana io ny filohan’ny Repoblika am-perinasa.Tamin’izany no nanamarihan’izy ireo ny tokony hamoahana izay tompon’antoka tamin’izany famonoana ny mpiray tanindrazana izany.Tsy ny filoha Ravalomanana velively no nanome baiko hitifitra, iza ary no tao ambadik’izany?
lire ici lettres
Ny baolina boribory !
Auteur Solo Razafy*Publié le 3 juin 2011 3 juin 2011 Catégories Politique
6 pensées sur “Raharaha 07 Febroary : any amin’ny TPI ny baolina !”
Ho tahin’ny Avo ianareo
tsy voarebirebin’ny vola sy wawawa
eto @ tany hanjakan’ny jiolahy…
3 juin 2011 à 21 h 43 min
Ny marina tsy mba maty ary, ny tody tsy misy fa ny atao no miverina.
manao an´Andriamanitra tsy misy ny Foza, ary mihevitra azy ho tsy maty manota.
Hafa ny firenena MALAGASY hanjakan´ny lalána jadona ny Foza,FITSARANA VOAVIDY VOLA; MITSARA VILANA SY MANONAO FOANA: ary hafa ny TPI ,hitsara mahitsy sy ara-dalána.
mihevitra ny Filoha hajaina Ravlomanana fa azo hatao tsindry hazo lena, na gaigy ka manaiky lembenana.
iZAY MANGINA VOLAMENA fILOHA RAVLOMANANA; ARY MINO NY ASAN´NY TOMPO ISIKA; HIARO ANAO HTRANY IZY ARY HIKASIKA NY MPITSARA AO @ TPI MBA HIVOAHAN´NY MARINA:
4 juin 2011 à 0 h 51 min
velona ny fanantenana ary dia handresy ny tsy manan-tsiny satria izany no lalàna eto an-tany.
Vao andihiny voalohany io fa mbola ho avy ny manaraka.
Aoka tsy hanao ratsy raha te ho olombanona.
Ny vahoaka toa tsy hiandry izany fitsarana izany fa raha vao vita ny Gaborone dia : NY VAHOAKA NO HITSARA AZY , ny vahoaka ihany no mahalala ny nahazo azy sy ny mangidy nentiny t@ ireo FOZA ireo eny fa na dia ny fianakaviany aza dia maty koa OMEO AZY IREO NY FITSARANA AN’I Ra-jouet-lina sy ny forongony
Tsara izany raha eo am-peletanan’ny TPI iny raharaha iny.Tokony tsy ho adino koa ireo maty kila rehatra tao anatin’ireny trano nodorana ireny tamin’ny fiandohan’ny krizy.
7 juin 2011 à 7 h 42 min
Tsara indrindra izany, aoka anefa hitandrina sao dia sanatria ho very an-javona any indray io « affaire » io, tsy hay intsony tsinona fa efa devoly latsaka an-tany ireto FATy ireto. Aoka koa isika eto an-toerana tsy ho kivy mihitsy n’inon’inona mitranga fa efa may volo tratra tsinona ny foza. Ny ahy dia ny tsy fanekene an’ireo hatramin’ny farany ihany no vahaolana, na dia ilana fihatrehana basy aman-tafondro aza.
Précédent Article précédent : RESOLUTIONS DES FORCES POLITIQUES ET CIVILES, PARTIES PRENANTES A LA SOLUTION DE SORTIE DE CRISE
Suivant Article suivant : L’ouverture de l’enquête sur le génocide du 7 Février 2009